Qeybta:Warqadaha Iskaashiga6 min akhris
Deeqdii ugu horreysay waxaa laga abaal mariyey Cimilada Magaalada Minneapolis iyo Sanduuqa Sinaanta Sinaanta
Sanduuq samafal oo cusub oo taageeraya waxqabadka maxalliga ah ee ku saabsan isbeddelka cimilada ayaa ku deeqay deeqihii ugu horreeyay.
The Waxqabadka Cimilada ee Minneapolis iyo Sanduuqa Sinaanta Jinsiga, iskaashi ka dhexeeya Magaalada Minneapolis, Minneapolis Foundation iyo Ururka 'McKnight Foundation', ayaa maanta shaaca kaqaaday maalgalinta sedex hay'adood oo maxali ah kuwaas oo howlo hal-abuurnimo ka wada magaalada oo dhan, gaar ahaan xaafadaha kaladuwan, xaafadaha dakhligoodu hooseeyo halkaas oo dadka deegaanka ay sida caadiga ah saamaynta isbedelka cimilada.
“Baaxadda dhibaatada cimilada waa mid aad u ballaaran, laakiin lacagtan ayaa na siineysa mid la taaban karo, ficillada maxalliga ah ee aan arki karno oo aan dareemi karno. Waxa ka sii wanaagsan, waxay siisaa shakhsiyaadka fursad ay kula wadaagaan bulshada inteeda kale si ficillada hal qof ay qayb uga noqon karaan dhaqdhaqaaq saameyn leh, ”ayuu yiri RT Rybak, Madaxweynaha iyo Maamulaha Aasaaska Minneapolis, oo maamusha sanduuqa.
Kate Wolford, Madaxweynaha Mu'asasada McKnight ayaa tiri: "Waxaan dhiirigelinay jawaab celinta adag ee Sanduuqa Cimilada Cimilada iyo Sinnaanta Sinaanta Sinaanta." “Mashaariicda la maalgeliyey waxay muujinayaan in jaaliyadaha reer Minneapolis ay ku dhiiran yihiin inay si deg deg ah wax uga qabtaan isbedelka cimilada iyadoo la hubinayo in isbeddeladeena tamar nadiifka ah aysan ka tagin cidna. Waxay soo bandhigaan habab hal abuur leh oo lagu kordhinayo marinka xulashooyinka gaadiidka nadiifka ah, iyagoo u keenaya adeeg hufnaan xagga tamarta ah bulshooyinka sida ugu badan u baahan, isla markaana u sii faafinaya faa'iidooyinka kala guurka tamarta nadiifka si caddaalad ah. Iyada oo la sii wado taageerada wada-hawlgalayaashayada, xalalka maxalliga ah waxay horseedi karaan isbeddello ballaaran oo ka dhaca gobolka iyo gobolka. ”
Wajiga labaad ee deeq-lacageedka ayaa furmi doona Agoosto 1. Saddexda deeqo ee la bixiyay wareegii koowaad waa kuwan soosocda:
$ 25,000 ilaa MN Cusboonaysiin karo Hada Mashruuc lagu mideyn doono cilaaqaadyada xoogan ee bulshada iyo khibradda barnaamijka tamarta nadiifka ah si loo xoojiyo deggeneyaasha Waqooyiga Minneapolis si ay u qaadaan ficillo tamar nadiif ah. Mashruucan wuxuu laba siyaabood u yareyn doonaa qiiqa gaaska cagaaran ka dib: Marka hore, wuxuu kicinayaa ganacsatada iyo dadka deegaanka inay u wareegaan koronto la cusboonaysiin karo. Midda labaad, waxay ka faa iidaysan doontaa midhihii booqashooyinka Tamarta Guriga ee dhawaanta la soo dhaafay si loo wado dahaadhka iyo nidaamka kululaynta, si loo yareeyo isticmaalka tamarta deegaanka. Wacyi galinta waxaa sameyn doona dadka deegaanka ee jecel inay dhisaan dhaqan ku xeeran tamarta waarta ee bulshada taariikh ahaan soosaaro, laakiin leh dan weyn oo ah inay noqdaan “cagaar”.
$ 17 500 ilaa Diinta & Laydhka Minnesota ee loogu talagalay mashruuca cadaalada deegaanka ee dhalinyarada u horseedi doonta dhalinyarada labada gole ee waqooyiga Minneapolis inay yareeyaan raadkooda karboonka inta ay ku dhisayaan awooda iyo taajirnimada beeshooda. Deeqdan, ayay dhallinta ku sugan Macbudka Shiloh iyo Masjidka An-Nuur waxay ka wada shaqeyn doonaan inay si toos ah uga baaraandegaan xisaabtanka tamarta labada aqal cibaadada. Dhallintu waxay daaha ka qaadi doonaan qiimeeyayaasha tamarta, waxay falanqeyn doonaan xogta, waxayna kala shaqeyn doonaan Xarunta Tamarta iyo Deegaanka iyo Ururka Qandaraasyada Yaryar si loo sameeyo qorshe shaqo. Iyaga oo kaashanaya hogaamiyaasha dadka waaweyn, waxay u xilsaari doonaan shaqada isla markaana ay qorsheyn doonaan ugu yaraan laba dhacdo si ay u soo bandhigaan qorshaha, u bixiyaan nalalka nalalka una caawiyaan xubnaha bulshada inay dhisaan xisaab-tirka guryahooda.
$ 25,000 ilaa HOURCAR wacyigalinta bulshada iyo kaqaybgalka taageerada shabakad cusub ee koronto-dhalinta oo HOURCAR ay ku horumarinayso iyadoo lala kaashanayo Xcel Energy iyo Magaalooyinka Minneapolis iyo Saint Paul. Shabakadda, oo lahaan doonta 150 baabuur oo koronto ah iyo 70 xarumo dhaqdhaqaaq oo leh kaabayaal wax ku ool ah, ayaa diiradda saari doonta adeegga loo fidinayo xaafadaha danyarta ah iyo bulshooyinka midabka leh. Kala badh xarumaha waxaa ku jiri doona xaafado kaladuwan, xaafado faqri sare ah, iyo 10 ka mid ah xarumaha la soo bandhigay waxay ku yaalliin aagaga cagaaran ee loogu talagalay Magaalada Minneapolis. Diyaargarowga mashruuca, HOURCAR waxay soo saartey hindise ku saleysan ka qeyb galka bulshada si loo xoojiyo cilaaqaadka ay la leedahay iyo aruurinta jawaab celinta laga helo bulshada mashruucan loo soo jeediyay in laga shaqeeyo.
Guud ahaan, Sanduuqa wuxuu helay $ 291,000 guud ahaan codsiyo ka yimid 17 dalabyo deeq ah. Codsiyada waxaa dib u eegay gudi ka kooban xubno ka shaqeeya Minneapolis Foundation, McKnight Foundation, Magaalada Minneapolis, iyo Xafiiska Duqa Magaalada iyo sidoo kale dhowr degane oo ka shaqeeya guddiyada shaqada ee Magaalada Minneapolis.
Sanduuqa waxaa loo sameeyay in lagu xiro wax wada qabsiga iyo iskaa wax uqabsashada iyadoo la adeegsanayo meel ku saleysan, oo bulshada u horseedeysa yareynta qiiqa gaaska ka baxa magaalada Minneapolis.
Qiyaastooda awgood, waxqabadyada cimilada maxalliga ah ayaa inta badan aan haysan maalgelin u go'an.
“Deeqdaani waxay muhiim u tahay howsheena waxayna qiimo u leedahay beesheena,” ayuu yiri Robert Hull, Madaxa Golaha MN Renewable Now. “Badanaa marar badan, dadka daggan Waqooyiga Minneapolis ayaa ka taga wadahadalka tamarta la cusboonaysiin karo sababtuna waa hawlgal adag oo ay fulinayaan kuwa aan aqoon u laheyn sida ay ula dhaqanto woqooyiga Minneapolis. Waxaan nahay urur waqooyiga Minneapolis hogaamiya oo ka socda Northsiders kuwaas oo ku jecel barashada iyo barbaarinta waqooyiga Minneapolis ku saabsan tamarta dib loo cusbooneysiin karo iyo sida aan hadda wax u wadno. "
Hay'ada Cimilada ee Minneapolis iyo Sanduuqa Sinaanta Sinaanta ayaa laga soo saaray $ 100,000 oo laga soo qaatay Mu'asasada McKnight. Tan iyo markii la bilaabay gugan, sanduuqa wuxuu helay in kabadan $ 22,000 tabarucno dheeri ah, oo ay ku jiraan hadiyado ka yimid Xcel Energy Foundation iyo Askov Finlayson. Ganacsiyada iyo xubnaha bulshada waxay ku tabaruci karaan santuuqa iyagoo qoraal ku diraya cimilada cimilada ilaa 243725, ama tagida cimilada iyo hawada.
Codsiyada wareega deeqda labaad ee deeqda ayaa la aqbali doonaa ilaa waqtiga kama dambeysta ah 4:30 pm on Sebtember 16, iyada oo la siinayo ogeysiiska bisha Nofembar 1. Codsadayaasha u qalma waxaa ka mid ah iskuulada, kaniisadaha, ururada xaafadaha, ururada ganacsiga, 501 (c) (3) samafalka iyo ururada samafalka ama ururada aasaasiga ah ee leh wakiil maaliyadeed. Codsadeyaashii hore waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan.
Sanduuqa wuxuu bixiyaa deeqo loogu talo galay meelaha ku saleysan, bulshada u horseedeysa iyo mashruucyo taasi oo dhalisay hoos u dhac muuqda oo qiiqa gaaska deegaanka. Abaalmarinta deeqda ayaa la filayaa inay u dhexeyso $ 2,500 iyo $ 25,000. Maalgalintu waxay taageeri doontaa soo jeedinno ku saabsan hal ama in ka badan yoolalka Qorshe Hawleedka Cimilada ee Minneapolis, oo ay ka mid yihiin:
Kordhinta waxtarka tamarta
Dhiirrigalinta isticmaalka tamarta dib loo cusbooneysiin karo
Hoos u dhac ku yimid maylalka baabuurta ayaa safray
Dadaalo lagu doonayo in dib loogu warshadeeyo, dib loo isticmaalo ama haddii kale lagu dhimo qashinka qashinka ee bulshada
Mashaariicda la maalgeliyey waa inay sidoo kale hormariyaan Qorshaha Tallaabooyinka Sinaanta Sinaanta ee Magaalada Minneapolis, qorshe afarta sano ah oo lagu soo rogayo mabaadi'da sinnaanta jinsiyada inta lagu jiro shaqada magaalada.
Duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa yidhi: "Qaarkood waxay ku qanacsan yihiin inay qarka u saran yihiin sidii loo xakameyn lahaa isbedelka cimilada - laakiin magaalada Minneapolis waxaan ka shaqeynaa sidii aan u dejin lahayn wadada." “Taasi waxay u baahan tahay in la tijaabiyo habab cusub iyo la shaqeynta la-hawlgalayaasha caddaaladda deegaanka. Waxaan uga mahadcelinayaa soo saarista taageerada Cilladaha Samafalka iyo Sinaanta Sinaanta Sinaanta, waxaan ka caawin doonnaa hal-abuurnimada maxalliga ah in ay qabtaan xitaa shaqo aad u adag oo ku saabsan wax walba laga bilaabo tamarta la cusboonaysiin karo iyo tareenka si hufan u shaqeeya.
Si aad wax badan uga sii ogaato waxa ku saabsan Sanduuqa, ku tabarucdo ama dalbato deeq, tag cimilada iyo hawada.
McKnight wuxuu soo dhaweynayaa Tenzin Dolkar oo ah Sarkaalka Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest
Hay'adda Minneapolis Foundation waxay ku abaal marisay $250,000 deeqo ah oo lagu taageerayo waxqabadka maxalliga ah ee isbedelka cimilada
By Minneapolis Foundation Diisambar 2020